Riix maanta waxa aad rabto berri. - Lorii Myers - xigasho Pedia
Riix maanta waxa aad rabto berri. - Lorii Myers
In kasta oo nolosha aan la saadaalin karin waa muhiim in aan u diyaarinno mustaqbalka. Kulligeen waxaan leenahay himilooyin iyo yoolal aan rabno inaan gaarno nolosha. Si riyooyinkanu u rumoobaan, waxaa muhiim ah inaan u qorsheysanno. Ma jiro waqti ku habboon ama meel ku habboon oo lagu bilaabi karo diyaarinta.
Had iyo jeer xusuusnow in shaqada adag iyo miyir-qabka ay kaliya kugu dhex mari doonaan. Aad ayey muhiim u tahay inaad qorsheyso ficiladaada si aad u gaarto waxaad rabto oo aad ugu qanacdo nolosha. Waxaa jiri doona carqalado iyo xitaa isbedelo sida aad u qorsheysan laheyd safarkaaga. Laakiin waxaa muhiim ah in aad diyaar u ahaato la tacaalida caqabadaha sidoo kale.
Waxaad u baahan tahay inaad nolosha ka hor tagto markay kugu soo dhowaaneyso, laakiin waxaa muhiim ah inaad ku ekaato xaaladaha noocaas ah. Waxaad ubaahantahay inaad raadsato qaab kale si aad ulaqabsato isbedelka oo aad uhesho waxaad rabto mustaqbalka.
Waxaad sidoo kale dareemi kartaa in wixii aad horey ugu qorsheysatey naftaada aysan kuu raali ka aheyn. Hubso naftaada. Haddii aad wali dareento inaad heshay rabitaan cusub oo aad rabto inaad raacdo markaa waxaad u baahan tahay inaad u qorsheysato sidaas si ku habboon.
Sii wad dadaalka oo wixii aad soo dhiibto intaad u maleyneyso inaad ku qanacsan tahay. Ma aha waxa aad rabto oo dhan si fudud uma imaan doonaan, marka waxaad u baahan tahay inaad riixdid. Waa inaadan dhiibin. Waxaad u baahan doontaa taageero laakiin waxaad xusuusataa taageeraha ugu adag ee aad naftaada u leedahay adiga ayaa ah.
Midnaba kuma soo istaagi doono sidaad doonaysid. Markaa waligaa ha lumin kalsoonida naftaada oo hore u soco. Ka fogow waxa aad rabto oo ku dadaal. Haddaad rabto inaad aragto isbeddel kasta oo bulshada dhexdeeda ku bilow naftaada. Ha sugin qofna inuu saxeexo fikirkaaga haddii aad u malaynayso inuu midho badan yahay. Hadaad wax fiican sameyso, waxaad arki doontaa saameynteeda goor dhow ama goor dambe.
Akhristayaal Wanaagsan oo Wanaagsan Maanta
Xigashooyinka dhiirigelinta ee maanta
Naftaada ku riix Quotes
Berrito ayaa ah quotes